2Do, waxaa la bixiyaa waqti xaddidan | waxaan ka imid mac
Ta 2aad, waa la iibinayaa wakhti xaddidan
Gacan-sare oo wanaagsan oo horumariyayaal ah ayaa ka faa'iideysanaya ololaha dhimista Jimcaha Black Friday, tani waxay muujineysaa markaan galno Mac App Store inaan helno dalabyo nooc kasta ah iyo in ka badan waqtiyada kale ee sanadka. Hadda midka ku yimaada qiimo dhimis waqti xaddidan waa 2Do, codsi aan horey u aragnay waxaan ka imid Mac waqtiyo hore iyo in Waxaan dhihi karnaa waa maamule hawleed weyn.
2Do, waxa uu ahaa mid ka mid ah codsiyada ay soo bandhigtay Apple sannadkii 2013-kii ee qaybta codsiyada ugu wanaagsan oo hadda waxa ay leedahay qiimo dhimis ku dhawaad ​​50%. Xasuusnoow in qiimo dhimistani ay xadidan tahay oo ay dhawaan soo noqon doonto qiimihiisii ​​caadiga ahaa kaas oo ah 54,99 euros.
2 Samee, waxay naga caawin doontaa inaan si wanagsan u maamulno hawl maalmeedkeena iyo waajibaadkeena, hadday tahay shaqada, waxbarashada, nolosha gaarka ah, guriga, iwm. Codsigan waxaanu ku noqon doonaa mid wax soo saar badan sida sharraxaadda appku ay tilmaamayso:
2Do waxay kuu ogolaaneysaa inaad qaadato qaab gebi ahaanba ka duwan sidii aad u maareyn lahayd howlahaaga. Iyada oo adeegsigeedu yahay mid si fudud loo istcimaalo iyo qaab dhammaystiran oo dabacsan oo astaamo awood leh, waxay kuu oggolaaneysaa inaad diiradda saarto waxa adiga kuugu muhiimsan: noloshaada. Ma jiro waddo khaldan oo loo adeegsado 2Do, oo ka duwan barnaamijyada kale ee wax-qabashada, kuma khasbi doonto inaad u hoggaansanaato hanaan maamul maarayn gaar ah.
Xaaladdan oo kale, qiimaha la dhimay waa 27,99 euro. Qiimo shaki la'aan aad u jaban oo loogu talagalay kuwa doonaya inay haystaan ​​codsiga laakiin aan rabin ama awoodin inay bixiyaan qiimaha buuxa. Xaaladdan oo kale waa dalab xiiso leh oo hadda leh taariikh dhicis mana garanayno inta uu soconayo ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Ta 2aad, waa la iibinayaa wakhti xaddidan